DAAWO Maxaan Sameeyaa Ninkeyga bishii hal mar ayuu ii galmoodaa!? | Gaaloos.com
Home » galmada » DAAWO Maxaan Sameeyaa Ninkeyga bishii hal mar ayuu ii galmoodaa!?
DAAWO Maxaan Sameeyaa Ninkeyga bishii hal mar ayuu ii galmoodaa!?
Hubaal waxaa ah Hadalka naxariista iyo sheekada ham hamta (Sheekada Macaan) in ay tahay talaabada ugu horeeysa ee Weerarka Galmada , waxaana la tilmaamay xitaa hablaha teenage mudda dheer marka sheekada macaan ee xod-xodashada maqasho in ay jiriricooto kadibna si tartiib tartiib ah aad ugu biloowdo Dhuuqmada dhanka Bishimaha faruuryaha.
Dhuuqmada waxaa ugu macaan in labada raaxeysanaya midba mid kale hal bishin ka dhuuqo tusaale in ninka dhuuqo bishinta hoose ee haweeneyda halka iyaduna ay ay si xaaso ay ku dheehantahay ay u dhuuqeyso midda sareeysa. Waxaa xusid mudan in dhuuqmada ay dhowr nooc kala leedahay waxaana ugu macaan midda sida aayarka la isku daliigo iyadoo la isku xan-xanteeynayo.
Xubinta Ugu Muhiimsan Dhuuqmada Ibta Naaska. Haweenka kacsi waali ah ayay ka qaadaan iyo istiimin aad u macaan marka si toos looga nuugo ibta hore ee Naaska iyioo si khafiif ah ilkaha ugu qabanaya sida adigoo wax qaniinaya oo kale.
Title: DAAWO Maxaan Sameeyaa Ninkeyga bishii hal mar ayuu ii galmoodaa!?
Posted by galmada Net, Published at 4:20 AM and have 0 comments